Wednesday September 19, 2018 - 20:44:02 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Hadaba su,aasha isweydiin mudan waxa ay tahay kuwo aad u tiro badan maqaalkeena maanta maaha mid u ekaan doono kan hada aad akhrineyso keliya waxaanu mid mid u dul istaagi doona musharixiinta iyo doorka siyaasiyiinta kasoo jeeda KGS weliba inagoo wax ka taaban doona siyaasiyiinta hore , dhexe sooyaalka taariikhda dadyowgan waxa ay ka aamin san yihiin .
Waxaad moodaa in ay jiri karto siriq badan waayo ? siyaasadu malaha saaxiib joogto ah ee waxay leedahay waa dano joogto ah , inagoo taas ka anbaqaadeyno ayaa hadana meesha aan ka marneyn inaanu xusno arimaha waaqiciga ah ee hada ay ku sugaan tahay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaana KGS.
Shaley waxaa ka horeysey waa doraad waxaana ku sugtaaba hadaad nooshahay waa beri taasi waxaan ula jeeda aduunyaduu waa tu isbedbedelo badan waxaa n ula jeeda akhriste meeli hadey kuu hagaagin degaan ahaan ama dano ahaan waad ka bedelan kartaa.
Hadaba aanu usoo daadegno dulucda maqaalka waxay ka siman yihiin dhamaan musharixiita cusub iyo taageerayaashooda ereyga isbedel doon halkana Maamulkii waqtigiisa dhamaan rabo ay leeyihiin Qaybo qofkeeda dhameystiro iyagoo weli ba halheys koodu yahay HIIGSI IYO HIMILO.
Halku dhigyada tabeelaha (slog) ay ku qoran yihiin musharax kastaahi waa isku mid ama waa isu dhow yihiin marka sidaa tahay shacabkiyoow maxaan kuu dan ah ? Ma qabiil baad ku taageereysa musharaxa mise danta guud iyo maslaxda Dalkaaga iyo Deegaankaaga ? Musharaxow maxay tahay ujeedka musharaxnimo oo dhab ah markii laga yimaado damac siyaasadeed ? intaasi iyo kuwo kasii badan ayaanu ku falan qeyn doona maqaaladeena dambe Insha Allah.
Maqaalka aanu ugu wanqalney MUSHARAXOW XAAL QAADO XILIBAAN MAXAA INOO BALAN AH ma dooneyno inaan xisaanada xilibaanka aanu u gefno laakiin heerka aqoontooda ama garashadooda sida uu u muuqdo xilibaanka waanu iftiimin doona ka qore ahaan waxaan kusoo dhoweynaa fikirka akhristaha ama qofkii daneynaayo qoraal taxadir leh uu iigu soo diro karo emailka ( sugoow55@hotmail.com)